Jamaica Tourism uye Grupo Pinero: Special Tourism Investment Hurukuro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica Tourism uye Grupo Pinero: Special Tourism Investment Hurukuro
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Gurukota rezvekushanya kweJamaica uye Grupo Pinero Executives
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett (anoonekwa pakati pamufananidzo) anombomira kuti atore mufananidzo nevakuru veGrupo Piñero: CEO, Encarna Piñero (kuruboshwe); uye Mutevedzeri weMutungamiriri, Hunhu & Innovation, Lydia Piñero.
Chiitiko ichi chaive musangano wakakosha pakati peGurukota Bartlett, vakuru vakuru kubva kubazi rezvekushanya pamwe nemasangano ayo eruzhinji, uye neboka revatungamiriri veGrupo Pinero.
Grupo Pinero ndiye muridzi weBahia Principe Runaway Bay, hotera huru muJamaica ine makamuri 1,375.
Ambassador weSpain kuJamaica, Mukuru wavo Diego Bermejo Romero de Terreros, vaivepowo.
Grupo Pinero ndeyake uye inoshanda makumi maviri nemanomwe nzvimbo dzekutandarira pasi rose dzine makamuri anopfuura zviuru gumi nezvina. Iyo kambani iri bullish paJamaica, nezvirongwa zvokuwedzera.
Mutungamiriri Mukuru, Corporate Communications